लुप्त भएको प्राचीन सभ्यता - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
लुप्त भएको प्राचीन सभ्यता
२०७६ पुष ८ गते मङ्गलवार
विश्वको परापुर्वकालको इतिहासमा लुप्त भएको प्राचीन सभ्यता भनेको क्रमशः माया सभ्यता, रेड इन्डियन सभ्यता, सिन्धु सरस्वती नदीको (Indus valley) अनि हड्प्पा सभ्यता जो, आजभन्दा हजारौं वर्ष पुर्व लगभग ईसा पुर्व ४६०० वर्ष पुरानो पुरातत्वन अनुसन्धान विभागद्वारा खोजी गरेर ठोस निष्कर्षमा पुगेको प्रमाण हाम्रो सामु प्रष्ट छ।
यी सभ्यतामा हाम्रो दक्षिणी एशियाली सभ्यता भनेको सिन्धु सरस्वती नदी घाटीको हड्प्पा, मोहेनजोदडो, कालीबंगा, लोथल, रोपड, आलमगीरपुर, धौलावीरी लगायत सभ्यता हुन्। यी सभ्यतामा हडप्पा, मोहेनजोदडो, कालिबंगा प्रमुख सभ्यता हुन् र विश्वले पाएको सबैभन्दा पुरानो मानव सभ्यता समेत हुन्।
मोहेनजोदडो सभ्यता १०० वर्षको कालावधी अघि सन् १९२१ र १९४२ मा अंग्रेज Enjineer पाकिस्तानसम्म रेल्वेमार्गको विस्तार गर्ने क्रममा जमीन खन्ने क्रममा जमीनबाट एकै सरहदेखि ईंट्टा पाएको हो। अनुसन्धान भएको र जमीनको गर्भमा लुप्त पुरानो मानव सभ्यता मोहेनजोदडो (city jf death) को खोजी भएको कुरा सबैमा जगजाहेर छ। यी सभ्यतामा बस्ने मानव द्रविड सभ्यताका थिए र प्राकृतिक पुजक हावा, पानी, आगोको पुजा गर्थे। आदीपुरुष भगवान शिवको लिङ्गरुपी पुजा गर्थे। बुद्धकाल भन्दापनि पुरानो सभ्यता सिन्धु घाटीको प्राचीन हडप्पा, मोहेनजोदडो सभ्यतामा खुदाईको क्रममा नाहुने ९०० यार्ड को swiming पूल, ७०० पानी पिउने इनार, कला सांस्कृतिक, भाँडा–बर्तन, जनावरहरुको अवशेष, मानव कंकाल, सालिकमा जनावरहरु, चराहरु, मानवप्रजातीको चित्रण देख्यो, हरेक कुरासँग सम्बन्धित सामग्रीहरु पाइएनन्। त्यतिमात्र नभएर आयुर्वेद औषधि, शल्यक्रिया हुने प्रमाण भेटिएनन्। फोहर पानी निष्कासन गर्ने Drainage प्रणालीसम्म भेट्यो। नभेटिएको हतियार मात्र हो। हामीले बुझ्न् सक्छौं हतियार न भेटिको कारण के हुनसक्छ? त्यतिबेलाको सभ्यतामा लडाइँ झगडा फटाहागिरी हुन्थियो होला त? हतियार न भेटिएको कारण (अनुसन्धानकर्मी) अनुमान लगायौं, सभ्यता मिलेर बस्ती गर्थे होलान्।
आर्य को हुन्? अनार्य को हुन्न ? आर्य कताबाट आएन ? आर्य असलमा कुन धर्मावलम्बी का रहेछन् शोधको विषय हुनुपर्छ ! इतिहास बिज्ञहरुका अनुसार आर्यहरु इरानबाट हुँदै दक्षिणी एसियामा खासगरी भारत अनि नेपालमा खैबरदर्रा बाट भित्रिएका हुन्। प्रश्न के छ भने सनातनी सभ्यता हिन्दु धर्म सिन्धु घाटीको सभ्यता हो भने आर्य हिन्दु हुनसक्दैनन्? यदी आर्य हिन्दु हो भने इरानबाट आएको हुनुसक्दैन? सिन्धु शब्दबाट हिन्दु शब्द वा विचारको उत्पति हो भने बाहेरीबाट आएको आर्य कसरी हिन्दु हुनसक्छ?
आर्य भनेको विदेशी आक्रान्ता? आक्रान्ता भनेको समुहमा Migrate हुने समुह, काँरवा, कबिला आक्रमणकारी। यी आक्रमणकारीहरु डुल्दै–डुल्दै एक अर्को सभ्यतामा आक्रमणगरी कब्जा गर्थेन अनि उनीहरुलाई गुलाम बनाउन्थे। उनीहरुको खेतीबारी, घर, बच्चा, गोरु, महिला–पुरुषमा आफ्नो स्वामित्व गर्थेन। द्रविड महिलासँग बिहे गर्ने सन्तान जन्माउने गर्थे। फेरि अर्को आक्रान्ता यीनी आक्रान्ताको माथी आक्रमण गरि पराजित गर्थेन। अनि आफ्नो स्वामित्व त्यो समुदायमाथी गरेको देखिन्छ। आर्य कुन संप्रदायका हुन्न मुसलमान वा हिन्दु ? यदी आर्य हिन्दु हो भने कति चालक छन् हेर्नुस् त द्रविड महिलासँग विवाह गरेर आफ्नो सन्तान जन्माउनेहरु। जोर–जबरदस्तीले गरेको विवाह हो जानी–नजानीको विवाह किन नहोस् उसले जन्माएको सन्तानको माथी विश्वास नगर्ने यस्तो चलन थियो। कतैबाट महिला असल कहानी जन्मेको बच्चालाई दिन्छिन् कि भन्ने सोचले बच्चालाई सदैब गुलाम बनाइन्थियो। महिलाले आफुमाथी आक्रमण नगरिसक्ने गरि हातखुट्टामा भारी–भारी गहना लगाउने चलन, कपडा शरीरको हात–खुट्टासम्म फेरिराख्ने चलन गरेको देखिन्थ्यो। त्योमात्र होईन महिला सती जानुपर्ने समेत कानून बनाए। यस्तो तरिकाको दमन, अत्याचार अनि विभेद थियो। आफ्नो सुरक्षाको दृष्टिकोणले सबै करतुत पर्दाफास गरेनन्। यिनीहरु को साथमा कहिले महिलाहरु हुन्थिएनन्। जुनसुकै समुदायमाथी आक्रमण गर्ने उता कि महिलासँग विवाह गर्ने चलन थियो। अर्को आक्रान्ताले आएर युद्धमा पराजित गरेकोमा त्यो कबिला छोडनुपर्ने हुन्थ्यो। इतिहासकारक हडप्पा सभ्यता पानीमा डुबेर, भुकम्पमा भत्केर, परमाणु परिक्षणमा ध्वस्त, ज्वालामुखीले गर्दा भनेका छन्।
हडप्पा सभ्यता लुप्त हुनाको मुख्य कारण गर्मी वातावरणले गर्दा अकाल सुखा थियो। जसले यो सभ्यता हराएको हो। अर्को सत्य भनेको बचेको सभ्यता यीनी आक्रान्ता आर्यहरुले नरसंहार गरि मारिएको हो। एवटा सभ्यताको नाश गर्दै अर्को सभ्यता अस्तित्वमा आएको हो। त्यो सभ्यता भनेको रुढीबादी मनुवादी सभ्यता। फेरि आयो हिन्दु धर्मा अनुसार वैदिक काल अनि द्रविड सभ्यता अनुसार बुद्धकाल। प्रथम क्रान्तिकारी तथागत भगवान बुद्धले यीनी आक्रान्ताहरुसँग धेरै वैचारिक द्वन्द गर्दै बुद्ध धर्म, प्रज्ञा, ज्ञानको समता बन्धुत्वको मिशाल संसारमा फैलाएको हामी सबैमा जानकारी छ। पुरात्ववादी अनुसन्धान विभाग वैज्ञानिक तरिकाले यस्को प्रमाण खोज्दै छन्।